यहि हो त सिलिन्डर पड्किनुको कारण ? - Aarthiknews
यहि हो त सिलिन्डर पड्किनुको कारण ?
नेपाल एलपी गयास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेको बुझाईमा एलपी ग्यास विस्फोट र आगलागीका घटना जनचेतनाको परिणाम हो । बिधुतको तार सर्ट भएर पनि ग्यास विस्फोट भएका छन् । उनले भने,‘पाइप, रेगुलेटर र सिलिन्डरको कमजोरीजस्ता कारण पनि हुन्छन् ।’
उद्योगी र व्यावसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र उपभोक्तालाई सचेत बनाउन नसक्दा दुर्घटना बढ्दै गएको छ । गुणस्तर विभागका अनुसार सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ। सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५५ वर्षमा यसतो परीक्षण गराइराख्नुपर्छ । तर बजारमा पुगेको सिलिन्डरहरुको त्यस्तो परीक्षण पास गरेको सुनिश्चितता न सरकार निकायले गरेको छन् न अन्य कसैलै । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।